उखुको जुस मनपर्छ ? यस्ता छन् उखु पिउदा ध्यान दिनु पर्ने कुरा - Koshi Online
उखुको जुस मनपर्छ ? यस्ता छन् उखु पिउदा ध्यान दिनु पर्ने कुरा
गर्मीका बेला हामी प्रायजसो उखुको रस पिउँछौं । यसले आँतलाई शितल बनाउँछ । यसका कयौं फाइदा छन् । जण्डिसको समस्यामा यसको फाइदा निकै हुन्छ । गर्भवती महिलाका लागि यो उत्कृष्ट पेय हो । यति मात्रै नभई यो डिहाइड्रेसनबाट बचाउन रामबाणसिद्ध हुन्छ । एनिमिया, क्यान्सरलगायतका रोगमा पनि उखुको रस लाभदायी हुन्छ । तर यसको अर्थ उखुको रस हरसमय फाइदाजनक हुन्छ भन्ने होइन । उखुको रस कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराबाट पनि लाभ र हानी तय हुन्छ ।
३. फ्रिज गरेको जुस ः उखुको रस ताजा पिउने हो भनेमात्र फाइदा हुन्छ । यदि फ्रिजमा राखेको जुस छ भने हानी हुन्छ । बासी जुसमा झिंगा पनि बसेको हुन सक्छ । किरा लागेको हुनसक्छ । यसले पसलबाट उखुको जुस खानुछ भने तत्काल पेलेको ताजा जुसमात्र पिउनुस् ।
स्रोत : स्वास्थ्य अखबार
बच्चाहरुको कपाल आकर्षक बनाउने केहि उपायहरु यस्ता छन्
गाडीमा चड्दा वान्ता हुन्छ भने अपनाउनुहोस यस्ता उपायहरु
सुत्दाखेरी मुखबाट –याल निस्कने समस्या छ भने अपनाउनुहोस यस्ता उपायहरु
मोटा बालबालिकामा आउन सक्ने समस्याहरु यस्ता छन्
घामको एलर्जीबाट छाला बचाउने उपायहरु यस्ता छन्
एलर्जीले सताएको छ ? यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस